Ankehitriny dia mitsahatra ny ala rehetra - fanamarihana sy soratra ho an'ny pirinty
Ankehitriny dia mitsahatra ny ala - fanamarihana sy lahatsoratra
Ankehitriny dia mitsahatra ny ala - lahatsoratra
Ny zokiny kokoa ilay zaza, ny tiany kokoa hampiasa ny feony amin'ny fihainoana hira sy mozika. Tsy tokony hatory fotsiny ny fanaraha-maso, fa amin'ny fialam-boly koa.
Soratra mozika sy soratra Amin'ny ankapobeny dia mijanona daholo ny ala
Ny ankizy dia tsy voatery mila fitaovana enti-mozika mba hanaovana mozika. Ny zava-drehetra mampihetsi-po, mitabataba na manao feo hafa dia ampiasaina. Ny feonao koa ampiasaina. Fa mba hahazoana antoka fa ny toerana dia farafaharatsiny farafahakeliny, ianao dia afaka manonta ny template noforonina ho an'ny namanao miaraka amin'ny fanamarihana sy ny lahatsoratra momba ny gidro kamboty. Ny ankizy lehibe kokoa dia afaka manoritra ny ravina amin'ny soratra sy ny lahatsoratra tsara ihany koa!
Ankehitriny dia mitsahatra ny ala rehetra,
Ny biby fiompy, olona, ​​tanàna sy saha,
matory izao tontolo izao;
fa ianao, ny toetrako,
Mitsangàna, on, tokony hanomboka ianao,
izay mankasitraka ny mpamorona anao.
Aiza ianao, ry masoandro, no mitoetra?
Ny alina nandroaka anareo,
ny alina, ny fahavalo andro.
Mankanesa any; masoandro hafa,
Ry Jeso ô, misaotra Anao aho,
Na dia mamirapiratra ao am-poko aza.
Efa lasa ny andro
ireo kintana mihidy
ao amin'ny efitrano manga;
Koa hitsangana aho,
rehefa handeha ny anarako
ry Andriamanitro ô, mialà amin'io ranomaso io.
Miala sasatra ny vatana
manaisotra ny akanjo sy kiraro,
ny sarin'ny fiainana an-tany;
Maka izany aho, manohitra izany
Hanampy ahy i Kristy
ny akanjon'ny voninahitra sy ny voninahitra.
Ny loha, ny tongotra ary ny tanana
dia faly fa hatramin'izao
Ho avy ny asa.
Mifalia sy miravoravoa ianareo, ry firenena;
avy amin'ny fahantran'izao tontolo izao
ary miasa amin'ny fahotana.
Mandehana, ry kibonao,
ny fandriana tianao.
Misy ora sy fotoana,
satria ho voaomana ianao
hametraka fandriana kely eto an-tany.
Mora ny masoko,
Tsy misy fotoana hikatonany.
Aiza avy ny vatana sy ny fanahy?
Raiso ho any amin'ny fahasoavanao izy
ho tsara ho an'ny ratsy rehetra,
maso ary miambina ny Isiraely.
Avoahy ny elany,
Jesosy, ny hafaliako,
ary raiso ny zanakao kely.
Ho lanin'i Satana va aho,
Aoka àry hihira ireo anjely:
"Tsy tokony hojerena ity zaza ity."
Eny, ry malalako,
aza malahelo androany
tsy misy loza na loza.
Andriamanitra dia mamela anao hatory amim-pifaliana,
alao sary an-tsaina ny fitaovam-piadiana
manodidina ny fandriana sy ny anjelin'ny anjeliny.
Fanamarihana avy amin'ny rhyme gardée Ankehitriny, ny ala rehetra dia mijanona ho toy ny tahirin-tsarimihetsika misokatra